OR UK Accommodation | Refugee Info Bus
Yoon biyya UK seene eessa jiraadha?
Odeeffannoo haala Mana jireenya biyya UK
Dhaabbanni Refugee Info Bus woraqaa odeeffannoo Biyya UK keessatti yoom akka seerri mana jireenya argachuu fi akkamiin akka argattan irratti isiniif qopheesse.
Adeemsichi garagara ta’us gargarsi mana jireenyaa UK keessatti argachuu kan dandeettan,
1. Woraqaa baqattummaa yoo qabaatte
2. Koolugaltummaf iyyattee yoo jiraatte
3. Iyyannoon kee koolugaltumma diddaa argattee jiraatte
1. Iddoo jireenya yoo woraqaa baqattummaa qabdan ta’e
Inni kun kan hojiirra oolu danda’u yoo woraqaa baqattummaa, koolugaltummaa, ykn carraa biyya sadaffaan woraqaa jireenyaa biyyaa Uktti argatteedha kunis qabaatteedha kunis (section 67 of the Immigration Act 2016) biyya UK irratti kan ibsameedha.
● Iddoo jireenyaa Council irraa argachuudhaaf
You nama iddoo jiraatu hin qabne taate carraan mana jireenya argachuu ol aanaadha. Mana argachuudhaaf yeroo dheera fudhachuu mala akkasumas mana filannoo keessanii argachuudhaf council isin itti iyyattan sun murteessaadha. Kunis,
● Yoo mana jireenyaa kan kireeffattu ta’e, Kfaltiin mana jireenyaa sun council dhaan kafalam (kunis tajaajila manaa fi liqaatiin)
● Iddoo jireenya yoo hin qabne fi torbaanota 8 keessatti manaan ala taatan ta’e gargaarsa council ni argattu.
Mana akkamitti akka argattani irratti Odeeffannoo, gargaarsaa fi gorsa Council irraa ni argattu akkasumas gara dhaabbilee namoota mana jireenya hin qabne gargaaranitti isin dabarsuu malu.
Yoo iddoo jireenyaa hin qabne Council mana isiniif kenna garuu dursi kan kennamuu:
a) Umurii 18 gad yoo taatee fi miseensa maatii kee keessaa namni umurii 18 gad ta’e jiraate.
b) Ulfa yoo taate ykn miseensa maatii kee keessa namni ulfaa yoo jiraate.
c) Ati nama mana dhabeessaa gargarsaa hatattamaa barbaaduu kana jechuun iddoo duraan jiraataa turte itti fuftee jiraachuu waan hin dandeenneef.
Hubachiisa: Yoo woraqaa jireenya kan baqattuummaa argatte mana duraan keessa jiraachaa turte guyyoota 28 keessatti gad lakkisuu qabda. Iddoo itti galtu kan qabduu fi hin qabne yoo ta’es Council irraa gargaarsa ni argatta. (Shelter England, 2018)
2. Iddoo jireenyaa yoo kan Kolugalaa taatan
Kun kan hojiirra oolu, yoo koolugaltummaadhaaf iyyannoo galfattanii deebii eeggataa jirattaniidha fi yoo diddaa argattanii ol iyyannoo galfattanii deebii eeggataa jirattaniidha. Mana kireeffachuu fi bitachuu ni dandeessu. (Iddoo sakkattaan immigireeshiinin itti argamutti hin dandeettu). Mootumaa irraa gargaarsa kafaltii liqaa manaaf oolu hin kennamu.
Koolu galaa yoo taatan kanneen kanaa gadii ni argattu:
● Mana jireenyaa mootummaa UK irraa
Mana jireenyaa filachuu hin dandeettan. Manni jireenya isiniif kennamu bakka mootummaan UK itti amane kamiiyyuu ta’uu danda’a. Haa ta’uu garuu London Kibbaa-dhiha ta’uu dhabuu mala. Manni jireenyaa mana salphaa kutaa tokko siree fi iddoo nyaata qabuudha, mana keessumma
fa’aadha. Mana jireenyi sadarkaan isaa gad bu’aa ta’ee fi namoonni UK keessa jiraatan hin barbaanne ta’uu mala.
3. Mana jireenya yoo diddaan iyyannoo koolugaltummaa isinif kenname
Inni kun Iyyannoo kolugaltummaa ykn iyyannoo namooma keesaniif murtiin diddaa inni dhumaa yoo isiniif kenname fi diddaa saniif yoo iyyannaa galfattanii hin jirreedha.
Iyyata koolugaltummaa fi Koolugaltummaa namooma keessaniif yoo diddaa argattan fi gara biyya keessaniittii daddaffin deebi’uu hin dandeettan ta’e, mana jireenya keessa jirtan san keessaa osoo hin bahin iyyannoo achi keessa turuudhaaf iyyannoo galfachuu qabdu. Kunis hanga
gara biyya keessanitti deebifamtaniif kan keessa turtaniidha
Dhima koolugaltummaa irratti diddaan isiniif kennamee gara biyya keessanitti akka deebitaniif isinitti himameera isin garuu debitanii hin jirtan yoo ta’e ulaagaa mana jireenyaa argachuu hin guunne jechuudha. Mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa haala isin biyyaa keessanitti
deebitaniin irratti gargaarsa isiniif godhu.